Halkalı Marmaray Gebze မြေပုံရပ်ပြီးပေါင်းစည်း Lines - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Halkalı Marmaray Gebze မြေပုံရပ်ပြီးပေါင်းစည်း Lines
30 / 03 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Maps, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဗွီဒီယို 1
GeBZe marmaray မြေပုံမှတ်တိုင်များနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံလိုင်းများ annelid
Halkalı Marmaray Gebze ပေါင်းစည်းရပ်ပြီးလိုင်းများမြေပုံ: နိုင်ငံသားများစိတ်အားထက်သန်စွာအစ္စတန်ဘူလ်စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း, Halkalı Gebze 10 Marmaray လိုင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မတ်လစေရန်စီစဉ်ထားသည်။ လိုင်း, ယခင်က 185 76 မိနစ်ကီလိုမီတာ Gebze- Halkalı ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ 115 မိနစ်အကြားလမ်း။ Gebze Halkalı တိုက်ရိုက်သွားနိုင်နေသောနိုင်ငံသားများအကြား, အချိန်မရွေးမိနစ် 1 10 နာရီအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Marmaray စီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများအတွက်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအလုပ်၏နယ်ပယ်အတွင်းထွက်ယူသွားတတ်၏။ ဥရောပဘက်ခြမ်းတွင် Halkalı Kazlıçeşmeအကြား, အ Anatolian ဘက်မှာ Gebze အတွက်နေစဉ် Separation ရေပန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ Project မှ 1 ။ ခြေလှမ်းလည်ချောင်းနှင့်KazlıçeşmeAyrılıkçeşmeအကြားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကျမ်းပိုဒ်နှင့်အတူဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Marmaray Halkalı Gebze လိုင်း
Obrascon Huarte လုပ် SA အိပျ - ထိုကန်ထရိုက်တာ Dimetronic လုပ် SA ဖက်စပ် 1.042.079.084,00 € değerinde bedelle ihale edildi. 76.6km uzunluğunda, Gebze Pendik Ayrılıkçeşme- Sirkeci Zeytinburnu Bakırköy Halkalı အချိန်လမ်းကြောင်းစုစုပေါင်းနေ့စဉ်ပုံမှန် 75 96 သယ်ဆောင်နေစဉ် Marmaray လိုင်းပြီးနောက်နာရီတဦးတည်းဦးတည် 1.2 တထောင်, တထောင်သန်းခရီးသည်ယာဉ်ကသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ အလုပ်ချိန်နာရီအချိန် 28 43-ဘူတာရုံလိုင်း mainline ရထားလမ်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအဖြစ်ကောင်းစွာရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်, အခြို့ဘူတာအပေါ်ပေးရစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ မွို့၌မက်ထရိုနှင့်လမ်းရထားလိုင်းကိုအဆိုပါ shoreline နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပေါင်းစည်းမည်ဖြစ်ပြီးအစ္စတန်ဘူလ် e-5 အသွားအလာပြီးစီးသည့်အခါကိုအလွန်စိတ်ချရန်စီစဉ်ထားသည်။
လက်စွပ် Marmaray Gebze STOPS
Halkalı Yenikapıအတွက် M1B ဘူတာရုံHalkalı မက်ထရိုလိုင်းနှင့်အတူ
Atakoy နှင့် Atakoy မြေအောက်ရထားဘူတာရုံ M9 Ikitelli လိုင်း,
M3 Bakirkoy Bakirkoy ဘူတာရုံ-Başakşehirမက်ထရိုလိုင်းနှင့်အတူ
Yenikapi Yenikapi ဘူတာရုံ M1-Ataturk လေဆိပ်,
YenikapıYenikapı-Hacıosman M1-Kirazli နှင့်မြေအောက်ရထားလိုင်းများနှင့်အတူ M2B,
T1 ကျောက်ခေတ်-Bagcilar လမ်းရထားလိုင်းကိုနှင့်ပင်လယ်နားမှာက Sirkeci ဘူတာရုံ,
M4 Tuzla Kadikoy မက်ထရိုလိုင်းနှင့်အတူခွဲခြာရေပန်းဘူတာရုံ
M8 Bostanci Bostanci-Dudullu ဘူတာရုံမက်ထရိုလိုင်း
Pendik Pendik Sabiha Gokcen လေဆိပ်မက်ထရိုလိုင်းအတွက် M10 ဘူတာရုံ,
İçmeler ဘူတာ M4 Tuzla Kadikoy မက်ထရိုလိုင်းနှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်။
MARMARAY တွင် TIME နာရီ
Marmaray Gebze လက်စွပ် LINE ၏ခ Tariff
IETT Marmaray'a နယူးပေါင်းစည်း Terminal နှင့်ဖွင့်လှစ် 28 / 01 / 2014 IETT အသစ်သောလိုင်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် Marmaray သို့ပေါင်းစည်း: İETTပင်ဆက်ပြောသည်အသစ်သောလိုင်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်မတိုင်မီ Marmaray သစ်ကို5၏အဖွင့်ဖို့ကိုချက်ချင်းဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထား။ İETTအသစ်ကပင်ဆက်ပြောသည်အသစ်သောလိုင်းများ5အောက်တိုဘာလ 29 နိုင်ငံတော်သမ္မတအဗ္ဗဒူလာဂူးလ်နှင့်ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်တွင်açıldı.açılışအဆိုပါ Marmaray ဖွင့်လှစ်သည်အခြားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Marmaray နှင့်အတူ၎င်း၏ပေါင်းစည်းမှုသေချာစေရန်နိုင်ရန်အတွက်ပါဝင်မှုနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အတူကျင်းပချက်ချင်းမတိုင်မီဝန်ဆောင်မှုသို့ခေါ်ဆောင်သွား 2013 နှစ်ဖက်အသစ်တစ်ခုဘတ်စ်ကားလိုင်းများဖန်တီးခဲ့သော IETT အဆိုပါ Marmaray undersea ဆက်သွယ်သောအခြားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ၎င်း၏ပေါင်းစည်းမှုသေချာစေရန်အလို့ငှာ။ အတူလိုင်းÜsküdar, Sirkeci, Yenikapıနှင့်Kazlıçeşmeဘူတာရုံ၏ဥရောပနှင့်အာရှနှစ်ဖက်အတွက်ခွဲခြာရေပန်း ...
GTO သမ္မတကိစ္စရပ်များကိုပြန်လည်အစီအစဉ်များအပေါ် Gebze'yl သို့ပေါင်းစည်းသင့်ကြောင်းဟူမူကား, အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Marmaray စီမံကိန်းတွင်ကျင်းပပါလီမန်၌သူ၏မိန့်ခွန်းအတွင်းယူဆောင် Chilling လက်သည်း 27 / 01 / 2012 စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Gebze ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (GTO) ဇန်နဝါရီကောင်စီအစည်းအဝေးတွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ GTO နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်သူ၏မိန့်ခွန်းမှာ Chilling ပါလီမန်လက်သည်း "ဟုအဆိုပါ Marmara ဒေသတွင်း၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်ထဲသို့ဝင်မသန်စွမ်းလုပ်သားတွေရဲ့အရေအတွက်ကအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မသန်စွမ်း၏İşkur Gebze နျဌာနခှဲ 941 ထံမှလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်။ ဒေသများကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေအတွက်နည်း။ ကျနော်တို့ကဒီမ၏အရေအတွက်နှင့်အတူကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Gebze ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (GTO), စည်းဝေးပွဲသူတို့ GTO နိုင်ငံတော်သမ္မတ Chilling လက်သည်း၏အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာစကားပြော 2011 အတွက်မလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ ။ အထွေထွေကောင်စီရဲ့Çayırovaဒေသခံအပေါ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ abled ရည်ညွှန်းပြီးÇilerဆိုပါတယ်သဘောပေါက်: "အထူးသဖြင့်ဘူဂေးရီးယား၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများအတွက်ကျနော်တို့ထုတ်ပေးပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနှင့်အတူအခက်အခဲများကိုကျော်လွှားချင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ...
Marmaray စီမံကိန်းကို 10 အမှတ်အတွက်ရထားလမ်းစနစ်ကသို့ပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည် 12 / 10 / 2012 အစ္စတန်ဘူလ်ပို့ဆောင်ရေးမှ General Manager ဖြစ်သူ Omar ကြယ်, အရထားလမ်းစနစ်ကအစ္စတန်ဘူလ် 10 အချက်ထဲမှာ Marmaray စီမံကိန်းသို့ပေါင်းစည်းမည်ဖြစ်သည်။ Karabükရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရုံတက္ကသိုလ်ကစီစဉ်ဗြဲနိုင်ငံတကာစနစ်အတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ General Manager ဖြစ်သူ Omar ကြယ်, မြို့ပြရထားပို့ဆောင်ရေးအတွက်စပီကာအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏ဖြစ်ရပ်မှန်ဆိုတဲ့တင်ပြချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Yildiz, အစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အလက်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရထားလမ်းစနစ်ကတည်ဆဲ, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရေတို, အလတ်နှင့်ရေရှည်စီမံကိန်းများတည်ထောင်ခြင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, စီးပွားရေးတည်ဆောက်ပုံ, စစ်ဆင်ရေး, ယာဉ်စင်း, အလုပ်ရုံ, R & D, တိုင်းရင်းသားလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ ကြယ်မှ xnumx't 2023 ကီလိုမီတာရထားလမ်း, အစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းစနစ်များအတွက် Marmaray စီမံကိန်းများ၏စီစဉ်ထားပြီးစီးဖော်ပြ ...
အတူပေါင်းစည်းခြင်းကိုခံရလတံ့သောသုံးဆ သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ် Marmaray ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, 16 / 12 / 2017 အချက်န်ကြီး Ahmet Arslan, 1915 Canakkale တံတားမျှော်စင်ကိုအခြားရထားလမ်းစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. ဖော်ပြချက်ထဲတွင်တွေ့ရသော "ဂရိတ်အစ္စတန်ဘူလ် Triple ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း" တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လာသည်ဟုကိုပင်ဟေဂင်လေဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစမ်းသပ်မှု၌တည်၏။ ဖော်ပြနှစ်ဦးစလုံး Kadikoy-Kartal လိုင်း Arslan ထံမှSöğütlüçeşme၏ Triple ဂရိတ်အစ္စတန်ဘူလ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Anatolian ဘက်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူလိုင်းပေါ်ကွဲပြားခြားနားသော9ရထားလမ်းစနစ်နှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်င် ", အ Marmaray သို့ပေါင်းစည်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ နေ့ 6,5 သန်း, လူများတစ်ဦးစီအတွက်ရထားလမ်း system များကိုအသုံးပြုအတူ ပေါင်းစည်းမှုပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ " သူကပြောပါတယ်။ အမ်းစထရောင်းအလေးပေးနှစ်ခုအသွားအပြန်-နှစ်ခုကားများအတွက်မျဉ်းမှလာမယ့်, အ Marmaray ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ Eurasian စီမံကိန်းကိုပေါင်းစပ်ဖြစ်သောစနစ်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မည် ...
Kadikoy-Kartal မီထရိုလိုင်း, İbrahimağaအတွက် Marmaray လိုင်းဘူတာနှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည် 21 / 02 / 2012 အဆိုပါ Anatolian ဘေးထွက်များအတွက်အိပ်မက်စီမံကိန်းကိုတစ်ခုမှာ Kadikoy-Kartal မီထရိုလိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ဇာတ်သိမ်းရေတွက်ရက်ပေါင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသည်နှင့် Kadikoy-Kartal မီထရိုလိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နောက်ထပ်အရှိန်မြှင့်ရန်စီမံကိန်းနှစ်ခုတိုက်ကြီးသယ်ဆောင်ရန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွန်ကဲကဲ Kadikoy-Kartal ကြား D-100 လမ်းမကြီးဝင်ရိုး, ကİbrahimağaဘူတာထဲမှာ Marmaray လိုင်းနှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်။ စနစ်ကိုလည်း Kadikoy Kadikoy Square ကို built-in ပင်လယ်ကို link ကိုဘူတာရုံမှတဆင့်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီးသတင်းများအရကားမောင်းဆက်ပြောသည်။ ... မေလနှင့်အတူတစ်နေ့လျှင်91,5 သန်းခရီးသည်စွမ်းရည်မြေကြီးလှုပ်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုဆီးတားဖို့ဒီဇိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas, ခရီးသည်များတင်ဆောင်စတင်မည် ...
Gebze Halkalı ကောင်တီလိုင်း Marmaray ကနေရှုံးရလိမ့်မည်ဘယ်ဟာ
Halkalı Gebze အခကြေးငွေအချိန်ဇယား
Halkalı Gebze marmaray အခကြေးငွေအချိန်ဇယား
HalkalıMarmaray မှတ်တိုင်များ -Gebz
HalkalıMarmaray မြေပုံ -Gebz
HalkalıMarmaray လိုင်း -Gebz
အဆိုပါ Marmaray လိုင်းများနှင့်အတူပေါင်းစည်း
နှစ်ဦးအားရထားအီတလီနိုင်ငံကွဲသွားရင်: 50 ဒဏ်ရာရ
အဆက်မပြတ် Marmaray Marmaray စခန်းများနှင့်အခကြေးငွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်း updated ...
IETT Marmaray'a နယူးပေါင်းစည်း Terminal နှင့်ဖွင့်လှစ်
GTO သမ္မတကိစ္စရပ်များကိုပြန်လည်အစီအစဉ်များအပေါ် Gebze'yl သို့ပေါင်းစည်းသင့်ကြောင်းဟူမူကား, အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Marmaray စီမံကိန်းတွင်ကျင်းပပါလီမန်၌သူ၏မိန့်ခွန်းအတွင်းယူဆောင် Chilling လက်သည်း
Marmaray စီမံကိန်းကို 10 အမှတ်အတွက်ရထားလမ်းစနစ်ကသို့ပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်
အတူပေါင်းစည်းခြင်းကိုခံရလတံ့သောသုံးဆ သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ် Marmaray ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း,
Kadikoy-Kartal မီထရိုလိုင်း, İbrahimağaအတွက် Marmaray လိုင်းဘူတာနှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်
Halkalıဆွဲထား Marmaray 43 Duraklıလက္ခဏာတွေမှ -Gebz ရထား